Kiniiniga Digaaga Digaaga | December 2019
Ugu Weyn Ee Kiniiniga Digaaga Digaaga
Digaag aan lahayn hen: uuminta ukunta digaaga
Noocyo farabadan oo digaag ah, kuwaas oo muddo dheer ku dhacay doorasho taxadar leh, nasiib daro, waxay ku dhow dahay dhammaan wixii muujinaya dareenka hooyada. Laakiin inkasta oo ay sidaas tahay, digaagga dhalinyarada ah waxaa lagu daadiyaa beeraha digaaga iyo qoysaska. Tani waa wax la samayn karo sababtoo ah hibbada dhalashada ee shimbiraha, taas oo ka kooban digaagga taranta iyada oo aan digaag.
Sida loo dhigo ukumaha ku jira kobcin
Iibsashada guriga waxaad ku heli kartaa tiro wanaagsan oo digaag caafimaad leh. Laakiin arin muhiim ah oo saameyneysa tirada cayayaanka iyo ciribtirka ay ku jirto ayaa ah saxda ah ee ukumaha "saxda ah". Waxaa sidoo kale muhiim ah in la doorto walxo kulul, iyo sidoo kale inaad barato shucuurta shakhsiyadeed ee ka mid noqoshada noocyada gaarka ah.
Haddii aad go'aansato inaad korto oo aad daaqdo digaagga, isla markiiba ama waqti ka dib waxaad u baahan doontaa inaad ku noolaato xilligii guurka. Maanta, xitaa beeraha yaryar, loogu talagalay in la isugeeyo shimbiraha, kulubka waxaa loo isticmaalaa, maaddaama hingability of farcan ee iyaga ka sareeya, iyo khayraadka beerashada wax yar. Marxaladdan, beerwalaha digaaga ee aan khibrada lahayn ayaa laga yaabaa inay qabaan su'aalo badan oo ku saabsan wakhtiga hirgelinta iyo nidaamka laftiisa, baahida loo qabo in lagu caawiyo qallajinta bacda iyo qodobbada kale ee muhiimka ah.
Maxaad ujirta qashin-qubka ku samaysay mishiinka?
Qaadida chicks maahan had iyo jeer in ay sameeyaan hen. Kulubka, oo lagu soo saaro qalabka casriga ah, ayaa loogu talagalay in lagu fududeeyo oo la dedejiyo geeddi-socodka dhalinta, iyo xulashada ballaaran iyo tayada moodooyinka waxay xaqiijin karaan guusha hawshan. Laakiin, nasiib daro, habka hirgelinta ayaa badanaa dib loo dhigaa oo dhib badan yahay ama ma dhicin, oo waxaa jira sababo badan oo tan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kiniiniga Digaaga Digaaga 2019